I-Cut Cut ye-PGA Tour Tournaments rhoqo
Ukucacisa ukuba baninzi abadlali begalufu benza ukusika kwiPGA Tour
Iingqungquthela eziqhelekileyo ezigcinwe njengenxalenye ye-Golfer's Association Association ( PGA ) Tour ulandela okokuthiwa ngumgaqo oqhelekileyo wokunquma xa uqikelela ukuba ngubani ohambayo ekudlala imidlalo emithathu emva kokuqala kwe-36, emva koko emva kweemingxuma zokuqala ezingama-54.
Ngonyaka we-2016 ukuya ku-2017, ukunyuka kokuqala kweetournaments kugcina abadlali abangama-70 (okanye ngaphezulu) ngamanani amanqanaba aphantsi (kunye nazo zonke izibophelelo), kodwa ukuba oko kubangela abagolisi abangaphezu kwe-78 ababenqumlayo , ukusikwa kwesibini kwenzeka emva Izimbobo ezingama-54, kwakhona kwii-70 izikolo eziphantsi kunye nezibophelelo; Nangona kunjalo, ukuba ngaba badlali banqunyulwa ngexesha lesibini, baqatshelwa ukuba "banqunyulwa, abazange bagqibe" (MDF) kwaye banakho ukufumana imali yokwenza loo nto.
Kukho ukungafani kulo mgaqo, kwanePGA Tour. Kwiithamnethi abanomgca ongaphantsi kwe-78, ngokusoloko kunqunywe konke kwaye bonke abadlali bayaqhubeka ekupheleni kwekhosi.
Okungekho kwiNqanaba eliMgangatho
Njengoko kuphawuliwe, umgaqo wokunqunyulwa oqhelekileyo usebenza kwii-tournaments "zexesha eliqhelekileyo" ze-PGA Tournaments - ezo ziganeko ezingafaniyo, kungekhona kwiiMidlalo zeMidlalo zoMqhubi weHlabathi okanye ezinye iintambo zemizuzu emifutshane.
Enye into ephawulekayo kukuba nganye yezibuko ezine zilawulwa ngokwawo:
I-Masters Cut Rule
US Open Cut Rule
I-British Open Cut Rule
I-PGA Championship Cut Rule
Ezinye iziganeko "ezingenangqiqo" zibandakanya umqhudelwano weWGC, iCIMB Classic - idlala eMalaysia kunye nensimu ye-78-ezo zimbini. Kwakhona, umqhubi wonyaka weJanuwari-owodwa obizwa ngokuba yi- Hyundai Tournament of Champions ) kunye neendlela zokugqibela zethampani kwi-PGA Tour schedule - iBomW Championship kunye ne- Tour Championship- abababi.
I-PGA Tour Cut Cut Rule yagqitywa ngo-2016
Umgaqo osikiweyo oqhelekileyo okhoyo ngoku kwi-PGA Tour uye waqhubeka ukususela ngo-2016 - ngumnyaka wokutshintshwa kokugqibela kwenkqubo yomgaqo wokutyelela. Nangona kunjalo, ngo-2008, ukutyelela kwazisa oko kwaziwa ngokuba yi-"Rule 78," umgaqo obonakele kakhulu kwaye wabangela ukugqithiswa okukhulu kunokuba utshintsho oluthile lwenziwa ngo-2016.
NgokweMigaqo ye-78, ukuba umgaqo osikiweyo (ngaphezulu kwama-70 kunye kunye nezibopho ezingama-36) kubangele kwi-golfers engaphezu kwe-78 eyenza ukusikwa, umgca wokunqunyulwa ushukunywe ngesifo esisodwa-ke, uthi umgca osiweyo ube ngu-+2, kodwa + 2 kwaphumela kuma-golfers angama-80 enza ukusika. Ngaloo ndlela, phantsi komthetho we-78, umgca wokunqunyulwa wanyuswa ukuya ku-+1, kwaye bonke abagadi begalufu kwi-+2 (kulo mzekelo) babengavunyelwe ukudlala ngeveki (nangona oko kubangele ukuba bangaphantsi kwama-golfers angama-70 enza kunqunyulwa). Mhlawumbi kuphela i-62 okanye i-66 yabagadi begalufu baqhubela phambili kwiinqanaba ezimbini zokugqibela.
Umthetho we-78 wawunokuphikisana kangangokuthi ingaphantsi kwenyanga emva kokuqala ukusetyenziswa kweBhodi yePolisi yeNkqubo yokuTyelela ukutshintsha, kwaye umphumo wale tshintsho yi-PGA Tour cut which exists today.
Iipookies ezindala kakhulu zePGA Tour
Imfazwe Yehlabathi II: i-North American P-51 Mustang
Abafazi be-2015 Alpine World Championship Super G Race
Izizathu Ezilishumi Kutheni Akufanele Ucinge NgokuThengisa iPhepha Lophando
IGyunivesithi yaseGeorge Washington GPA, SAT, kunye neMithetho ye-ACT
21 Ukuzonwabisa kweeTekisi zeeTekisi ezivela kwiPro Golf igxilise
Indlela yokusebenzisa i-Semicolon